१४ बर्षीय किशोरले घरको बाँसमा पासो लगाए , बावु-आमालाई कारण देखाए ...
भदौ १७, २०७६ Sabin Timilsina
काठमाडौँ : बावु-आमाले गाली गरेको निहुँमा १४ बर्षीय किशोरले ज्यान फालेका छन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका-२० निवासी नविलाल प्रसादका छोरा गोविन्दप्रसाद चौरसियाले आफ्नै घरमा पासो लगाएका हुन् ।
आमा-बुवाले गाली गरेको कारण देखाउँदै उनले घरमा प्रयोग भएको बाँसमा पासो लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
गोविन्दलाई सो अवस्थामा देखेपछि घरका परिवारले उपचारका लागि नारायणी अस्पताल पुर्‍याएपनि उनको केही समयमै निधन भएको हो । उनको शव पोष्टमार्टमपछि परिवारलाई बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक आचार्यका अनुसार आकस्मिक सेवालाई बिरामी भर्ना भएको भवनबाटै सेवा दिँदा छिटो र छरितो हुने भएकाले सोको व्यवस्था गरिएको हो । अस्पतालका प्याथोलोजिष्ट डा. रञ्जनराज भट्टका अनुसार आकस्मिक सेवाअन्तर्गत ‘युरिया क्रेटीनियन, सोडियम, पोटासियम, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, डब्लुबीसी काउण्ट’जस्ता परीक्षण आकस्मिक सेवाबाटै दिइनेछ ।
अन्य सबै परीक्षण प्याथोलोजी विभागबाट हुने उनले जानकारी दिए । हाल ४४३ श्यया सञ्चालनमा रेहेको सो अस्पतालमा नेपालभर र भारतबाट पनि उपचारका लागि बिरामी आउने गर्दछन् ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, भदौ १७, २०७६१४:०४
भारतिय राष्ट्रपति नेपाल आउँदा सार्वजनिक बिदा
चिनले बाढीपहिरोपिडितका लागि १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा
गुडिरहेको रेलमा किचिएर तीन नेपालीको मृत्यु !
रिजल्ट कसरी हेर्ने भन्ने द्विविधामा हुनुहुन्छ ? यसरी हेर्नुहोस् रिजल्ट